KDE Plasma 5.24 Beta yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo | Linux Addicts
Plasma 5.24 beta yave kuwanikwa kuti iongororwe uye mune iyi vhezheni nyowani mukati mekunatsiridza kwakakosha tinogona kuwana izvozvo Breeze theme yakagadziridzwa, nekuti iko zvino kana uchitaridza makata, ruvara rwakajeka rwezvinhu zvinoshanda runotariswa.
Yakaita mamwe ekuona markup kuseta kutarisa pamabhatani, zvinyorwa, mabhatani eredhiyo, masiraidhi, uye mamwe madhiri. Iyo Breeze color scheme yakatumidzwa zita rekuti Breeze Classic kuitira kupatsanurwa kwakajeka kweBreeze Chiedza uye Breeze Rima zvirongwa. Yakabviswa iyo yakakwira mutsauko color scheme (Breeze High Contrast), pachinzvimbo chainokurudzirwa kushandisa yakafanana Breeze Rima scheme.
Kuona kwakavandudzwa muzviziviso, kukwezva kutarisisa kwemushandisi uye kuwedzera kuoneka mune yakajairika runyorwa, kunyanya kukosha zviziviso zvave kuratidzwa nemutsara weorenji padivi.
Mameseji emusoro anogadzirwa zvakanyanya kusiyanisa uye kuverengeka, pamwe nevhidhiyo zviziviso zvino ratidza pikicha yezviri mukati. Muchiziviso chechiratidzo, nzvimbo yebhatani rezvinyorwa yakashandurwa uye kuburitsa kwechiziviso chehurongwa nezve kugamuchira uye kutumira mafaera kuburikidza neBluetooth kwakapihwa.
Imwe shanduko yatinogona kuwana ndeye kana widget yemamiriro ekunze yawedzerwa kekutanga, ichakumbirwa kugadzirisa nzvimbo yayo uye sarudzo, mukuwedzera kune otomatiki kutsvaga mune ese anoenderana nemamiriro ekunze masevhisi.
Pascreen kupenya kutonga widget uye kutarisa kwebhatiri, iyo interface yakagadziridzwa kudzima maitiro ekurara uye kukiya skrini. Pakupera kwebhatiri, iyo widget ikozvino inongogumira kune zvinhu zvine chekuita nekudzora kupenya kwescreen.
Yakabviswa miseve mushure memazita echikamu muKickoff menyu padivi kubatanidza kutaridzika uye kunzwa nemamwe mamenu epadivi.
Muwijeti inoshuma kushomeka kwemahara disk nzvimbo, kutarisa kwezvikamu zvakaiswa mukuverenga-chete modhi kwakamiswa.
Yakawedzera kugona kuseta desktop kumashure kubva pane yemukati menyu inoratidzwa kumifananidzo, pamwe nerutsigiro rwekuisa mifananidzo kubva kune simonstalenhag.se sevhisi mu "mufananidzo wezuva" plugin.
El task manager akavandudzwa so akawedzera the kugona kushandura kurongeka kwekutungamira kwemabasa pane pani, chinhu chekufambisa basa kune imwe kamuri (Basa) chawedzerwa kumenu yemaneja webasa, chinhu che "Start New Instance" chapihwa zita rekuti "Vhura Window Itsva", uye "More Actions" chinhu chave. yapiwa zita, yakaendeswa kuzasi kwemenyu.
KRunner inopa matipi ekushandisa akabatanidzwa nokuda kwemabasa ekutsvaga anowanikwa, anoratidzwa paunodzvanya chiratidzo chemubvunzo kana kuisa murairo "?".
Mugadzirirwo dhizaini yemapeji yakashandurwa ine mahombe ekuseta mazita (zvinhu zvave kuratidzwa pasina mafuremu) uye zvimwe zvirimo zvaendeswa kune yekudonhedza menyu ("hamburger"). Muchikamu chezvigadziriso zvemavara, unogona kushandura iyo yakasarudzika ruvara rwezvinhu zvinoshanda, pamwe neiyo interface yekuseta mafomati yakanyorwa zvachose kuQtQuick (mune ramangwana, zvakarongwa kubatanidza iyi configurator nemutauro marongero).
Muchikamu chekushandisa simba, kugona kuona muganho wepamusoro wechaji yerinopfuura bhatiri imwe yakawedzerwa uye chimiro chemutauri bvunzo mumaseting eruzha chakagadziridzwa patsva.
Mhedzisiro itsva yekutarisisa yaitwa. kuti utarise zvirimo zvemadhisikirwo ematafura uye kuongorora mibairo yekutsvaga muKRunner, inodanwa nekudzvanya Meta + W uye kufinyamisa kumashure nekukasira. Pakuvhura nekuvhara mahwindo, iyo Scale mhedzisiro inogoneswa nekusarudzika panzvimbo yeFade maitiro.
KWin inopa mukana wekupa nzira yekudimbudzira yekhibhodi kutamisa hwindo pakati kubva pachiratidziri. Inoitwa kuitira kuti Windows irangarire skrini kana yekunze yekutarisa yaburitswa uye ichidzokera kuchiratidziro chimwe chete kana chabairwa mukati.
MuDiscover modhi yawedzerwa kuti itangezve otomatiki mushure mekugadzirisa system, kuwedzera kune iyo application yekugadziridza peji yakagadziriswa (iyo yekuvandudza yekusarudza interface yakarerutswa, ruzivo nezve iyo yekumisikidza sosi inoratidzwa, chete chiratidzo chekufambira mberi chasiirwa zvinhu mukugadzirisa). Yakawedzera bhatani re "Reporta dambudziko iri" kutumira mushumo kune vanogadzira kit vanogadzira nezve matambudziko amuka.
Tambien Zvinocherechedzwa kuti performance of session yakagadziridzwa zvakanyanya zvichienderana neWayland protocol, Zvakanaka, ikozvino tsigiro yakawedzerwa kudzika kwemavara kupfuura 8 bits pachiteshi, zvakare iyo pfungwa ye "main monitor" yakawedzerwa, zvakafanana nenzira yekuona iyo yekutanga yekutarisa muX11-yakavakirwa zvikamu. Iyo "DRM lease" modhi yakashandiswa, izvo zvakaita kuti zvikwanise kudzosera rutsigiro kune chaiwo chaiwo mahedhifoni uye kugadzirisa matambudziko ekuita kana uchiashandisa. Iyo configurator inopa peji itsva kugadzirisa mahwendefa.
Spectacle ikozvino inotsigira kupinda kune iyo inoshanda hwindo muWayland-based session, pamwe nekukwanisa kushandisa widget kuderedza mahwindo ese akapihwa. Kudzoreredza hwindo rakaderedzwa kunodzosera kune yekutanga uye kwete ikozvino virtual desktop. Yakawedzera kugona kushandisa iyo Meta + Tab musanganiswa kuchinja pakati peanopfuura makamuri maviri (Basa).
Muchikamu chakavakirwa muWayland, iyo onscreen keyboard inoratidzwa chete kana iyo yakatarisa iri munzvimbo yekuisa mavara. Mune system tray, zvaigoneka kuratidza chiratidzo chekudaidza iyo chaiyo kiyibhodhi chete mune piritsi mode.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » KDE Plasma 5.24 Beta yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo
ikozvino ndiri kushandisa kubuntu hombe shanduko iyo kde yakave nayo mumakore achangopfuura mune ruzivo panogona kuve nekushanduka kukuru.